Pep Guardiola Waa Boqorka Kubadda Cagta Tobankii Sano Ee Ugu Dambeeyay – Tirada Koobabka Uu Hantay & Marca Oo Baahisay Macluumaad Dheeri Ah.
​Kadib markii uu xilli ciyaareed fashil ah oo lagu cambareeyay la qaatay Manchester City – hadda wuxuu sameeyay wax cajiib ah maadaama uu laba koob u qaaday, midka ugu weyn uguna muhiimsan waa inuu horyaalka ka dhex qaaday Jose Mourinho, Antonio Conte, Jurgen Klopp & Arsene Wenger.
“Waa mid ka mi ah guulahii ugu fiicnaa ilaa iyo hadda” ayuu yiri Pep ka hor inta aysan wiilashiisa xaqiijin axaddii hanashada horyaalka. “Horyaalkii ugu horeeyay ee Barcelona wuxuu ahaa riyo ii rumowday inaan Man United ka qaado Champions League waxey aheyd wax fiican, gaar ahaan sida aan u ciyaarnay” ayuu yiri mar kale.
Inuu hantay labada koob ee Carabao Cup iyo Premier League, waxey guud ahaan tirada koobabka uu hantay ka dhigtay 23 tan iyo markii uu bilaabay shaqadaan sanadkii 2008, waa tirada ugu badan oo uu shaqi sameeyo, kaliya Lauren Blanc ayaa kusoo dhaw oo 15-koob ku guuleystay tan iyo waqtigaas.
Macalimiinta Guulaha ugu badan gaaray 10-kii sano ee lasoo dhaafay:
1. Pep Guardiola (Barcelona, Bayern & City): 23
10. Arsene Wenger (Arsenal): 6
11. Antonio Conte (Juventus & Chelsea): 6
12. Diego Simeone (River Plate & Atletico): 6
Pep Guardiola wuxuu ku guuleystay 57% koobabkii uu u tartamay maadama uu hantay 23 ka mid ah 41 tartan oo uu hardan dheer u galay tan iyo bilowgiisii shaqadaan.
Marka laga hadlo sheekada kulamada, xidigii hore Barcelona wuxuu leyliyay kooxahii kala duwanaa 516 kulan isagoo guul gaaray 378 ka mid ah, waana qiimeyn dhan 73.25%.
Sidoo kalana wuxuu helayaa tixgelin gaar ah maadama uu guulaha ku gaaray sadex ka mid ah horyaalada ugu waaweyn yurub, taasoo khibrad kale u ah.
Guardiola markii uu koob la’aanta dhameystay xilli ciyaareedkii hore wuxuu yiri: “hadii aanan koobab ku guuleysan wax badan halkaan ma joogi doono, balse haatan waxey u muuqataa wax adan in la saadaaliyo muddo iney City xukunto England”
Sidoo kale Pep Guardiola sanadkiisii ugu horeeyay ee Barcelona wuxuu hantay sadexley koobab ah, walow uu isku dayay inuu qaabkiisii halkaas usoo raro England, hadana wuxuu ku muteystay dhaleeceyn badan.
Mudada uu tababaraha u ahaa Barcelona wuxuu kula guuleystay: 3 La Liga, 2 Copa del Rey, 3 Supercoppa de Espana, 2 Champions League, 2 UEFA Super Cup iyo 2 FIFA Club World Cup.
Markuu yimid Bundesliga iyo Bayern Munich wuxuu la hantay: 3 Bundesliga, 2 German Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA Club World Cup, balse nasiib xumo mudadii sadexda sano aheyd ee uu joogay Bayern kuma hogaamin wax ka badan Semi Final inuu dhaafiyo Champions League.
Kaliya Carlo Ancelotti iyo Jose Mourinho ayaa si la mid ah isaga hantay horyaalada sadex ka mid ah shanta horyaal ee ugu waaweyn yurub, Guardiola kaliya laba sano ayuu ku guuldareystay inuu horyaal hanto
Xiriirka Kubadda Cagta Yurub Ee UEFA Oo Cambaareeyay Dhibaatada Loo Geystay Michael Oliver & Xaaskiisa Kadib Rigooradii Uu Siiyay Real Madrid.
​Garsooraha reer England Michael Olivier ayaa dhexda ka galay mowjad muran ah kadib markii uu rigoore ka dhigay Juventus kulan ay guul ka heleen Real Madrid balse ay isaga hareen tartanka Champions League.
Bianconerri oo sadex gool kasoo laabatay ayuu garsoraha da’da yar ka dhigay rigoore waqtigii dhimashada kadib markii Benatia uu qalad ku galay Vazquez, muran badan ayaa laga keenay go’aankiisa waxeyna gaartay heer aflagaado loo geysto isaga iyo xaaskiisa.
Xiriirka qaaradda yurub ee UEFA ayaa u muujiyay iney garab taagan yahiin Olivier, waxeyna ka dhawaajiyeen iney cambaareynayaan dhibaato walba oo gudaha iyo banaanka garoonka loogu geystay Michael Olivier.
“Waan la xiriirnay si aan taageero ugu muujino, waxaan kalsooni ku qabnaa in saraakiisha qaabilsan ay talaabo ka qaadi doonaan dadka sida aan habooneyn ula dhaqmay intii uu ku jiray garoonka iyo baraha bulshadaba” ayuu yiri afhayeen u hadlay UEFA oo la hadlayay BBC Sport.
“Si xoog leh ayaan u cambaareyneynaa ficilada ay sameeyeen”
Booliska Ingiriiska ayaa bilaabay baaritaanno kadib markii Lucy Olivier ay heshay tiro aflagaado ah oo loo mariyay barta twitter-ka sida ay baahisay BBC.
Sidoo kale dhawr fariimo hanjabaado ah ayaa taeefoonkeeda gaarka ah ugu soo dhaca, kadib markii ay ciyaarta dhamaatay.
Hordhac: Celta Vigo vs Barcelona – Valverde Oo Dhawr Ciyaartoy Nasiyay & Messi Oo Noqon Doona Hogaamiyaha Balaugrana Ee Caawa.
​Barcelona ayaa maanka ku heysa iney hal gacan ku qabsan karto hanashada horyaalka La Liga hadii ay caawa guul ka gaarto kooxda Celta Vigo oo ay marti u tahay, wuxuuna kulankaan kasoo horeeyaa ciyaarta kama dambeysta Copa Del Rey oo ay isbuuca soo aadan ciyaari doonaan.
Balaugrana waxey caawa ka fogaan kartaa Atletico 14-dhibcood iyadoo kaliya 5-kulan uu dhankeeda u haray, balse wiilasha Simeone waxey ciyaari doonaan khamiista, iyadoo la ogaan doona markaas fogaanta ay kooxda reer Catalonia u jirto hanashada horyaalka.
Lionel Messi ayaan ka mid aheyn ciyaartoyda la nasiyay kulanka caawa, wuxuuna isha ku hayaa inuu sii dheereysto rikoorkiisa gooldhalinta horyaalka iyo sidoo kale inuu Salah kala wareego hogaanka tartanka loogu jiro Golden Shoe.
Warbixinta Kulanka:Kulanka: Celta Vigo vs Barcelona
Maxaa Ka Cusub Labada Kooxood?Celta Vigo waxey ganaax ku weyneysaa Hugo Mallo iyo Pablo Hernandez, taasna waxey ka dhigan tahay in Nemanja Radoja uu dhexda lamaan kula noqon doono Stanislav Lobotka. Sidoo kalana Facundo Roncaglia ayaa buuxin doona booska Hugo Mallo.
Barcelona waxaa dhaawac uga maqnaan doona Rakitic oo farta uu jab yar kasoo gaaray – si uu kulanka final-ka Copa del Rey u ciyaari nasiino ayaa la siiyay, sidoo kalana Pique, Iniesta iyo Busquets ayaa laga saaray safka kooxda ee caawa.
Shaxda Macquulka Ah:Barcelona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Mina, Umtiti, Digne; Vidal, Paulinho, Gomes, Coutinho; Dembélé, Messi
Xaqiiqooyinka Kulanka:Barcelona ayaan wax guuldaro ah la kulmin afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay tartamada rasmiga ah la ciyaartay Celta Vigo – 2-guul iyo 2-barbaro.
Barcelona ugu yaraan hal gool ayey ku dhalineysay Balaidos sideedii kulan ee ugu dambeysay.
Zinedine Zidane Oo Guushii 100-aad Xalay La Gaaray Kooxdiisa Real Madrid & Marca Oo Faah-Faahisay Wax Walba Oo Ku Xeeran Guulahiisa.
​Garoonka La Rosaleda ma iloobi doono Zinedine Zidane maadaama uu ku helay guushii 100-aad ee waayahiisa tababaranimo dhamaan tartamada oo dhan mudadiisa kooxda Real Madrid.
Macalinka da’da yar ee reer France wuxuu noqday boqoley ahaan guulaha la gaaro kan ugu fiican ee soo mara taariikhda kooxda boqortooyada 100-ka kulan ee ugu horeeya isagoo ku garaacay macalin walba oo kooxda soo maray.
Zidane wuxuu gaaray 66-guulood, 15-barbaro iyo 9-guuldaro isagoo leyliyay kulamada La Liga 90-kulan kooxdiisa.
Dhanka kale 20-guulood ayuu gaaray 30-kulan oo uu kooxda hogaamiyay koobka UEFA Champions League waxaana u dheeri ah 6-guuldaro iyo 4-barbaro, lix guul, 4-barbaro iyo 2-guuldaro ayuu sidoo kale ka helay koobka boqorka Copa del Rey – taasoo ka dhigan in 50% uu ka helay natiijo ahaan.
Koobka kooxaha Aduunka wuxuu helay 4-guulood taasoo u sahashay inuu laba koob ku helo halka Sidoo kalana 4-kulan ayuu ciyaaray Spanish Super Cup balse kaliya wuxuu ku helay hal koob.
Kaliya Jose Mourinho ayaa kusoo dhaw oo helay 71.9% kulamadii uu maamulay Real Madrid – 178-jeer ayuu hogaamiyay wuxuuna helay natiijo dhan 128-guulood.
Halyeeygii hore Portugal Miguel Munoz kaas oo ah macalinka ugu mudada dheer Los Blancos ayaa helay 59.1% maadama uu hogaamiyay kooxda 602 kulan, guulna siiyay 356-jeer.
Vicente del Bosque isna ma foga wuxuu helay 54.5%.
Dhinaca kale Leo Beenhakker ayaa isna helay 61.9%, halka Luis Molowny isna uu helay boqoley dhan 56%.